Rehefa miala amin'Andriamanitra ny zanakao (Ohab. 22:6)
Vakio ny Ohab. 22:6. Midika inona io andininy io? Mitombina mandrakariva ve io teny fikasana io? Hazavao ny valinteninao.
Amin'ny maha-ray aman-dreny dia manao izay tokony hatao rehetra ianao - manokana fotoana ampianarana ireo zanakao ny fahamarinana, miaina araka ny fahalalanao an'Andriamanitra, mandefa azy ireo mianatra any an-tsekoly, mankany am-piangonana tsy tapaka, manao asa fanompoana miaraka amin'izy ireo, kanefa mbola miala amin'ny finoana izay nitaizanao azy ihany izy ireo. Lehibe tokoa ny alahelo tsapa rehefa mitranga izany. Tahaka ny tsy misy fitsaharana ianao na dia iray segondra aza fa mitebiteby ny amin'ireo zanakao. Ho voavonjy ve izy ireo? Tsy fahadisoan'ny ray aman-dreny mandrakariva anefa izay miseho satria manana ny fisainany manokana ny zanaka, ary tompon'andraikitra amin'ny safidy sy ny fitondrantenany eo anatrehan'Andriamanitra rahateo izy ireo.
Noraisin'ny Kristianina sasany ho teny fikasana izay ao voalaza ao amin'ny Ohab. 22:6. Heveriny fa ny nitaizany ny zanany araka ny tokony ho izy no antoka hamonjena azy ireo. Tsy teny fikasana tsy misy fepetra mandrakariva anefa no hitantsika ao amin'ny Ohabolana fa mety ho fitsipi-piaina koa. Ny zavatra azontsika sintonina avy amin'ity andininy ity dia ny antoka fa ny lesona nianarana tamin'ny fahazazana dia haharitra mandritra ny androm-piainana; kanefa ny zanatsika no tsy maintsy manapa-kevitra ny amin'izay hinoany. Handray ny finoana sy ny fivavahan'ny ray aman-dreniny ve izy ireo sa hiala amin'izany? Tsy misy ray aman-dreny araka hanao izany safidy izany ho an'ireo zanany. Nampanantena ireo ray aman-dreny Andriamanitra fa hitoetra ao amin'ireo zanany mandrakariva izay nampianariny azy ireo, saingy ahoana raha toa ka miala amin'Andriamanitra ireo zanaka ireo? Mbola hitoetra ao am-pon'izy ireo hatrany ny voan'ny fahamarinana nambolen'ny ray aman-dreny, hanampy ireo zanaka ireo Andriamanitra hahatsiaro izany voan'ny fahamarinana izany. Tsy hitsahatra ny hanasa ireo zanatsika hiverina amin'ny fahamarinana Izy. Safidinao ny ho ray aman-dreny tsara, saingy an'ny zanakao kosa ny safidy ny amin'izay zavatra inoany.
Inona no tokony hataonao rehefa mania ny zanakao? Avereno amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka mafana izy. Raha misy ny olona mahatakatra ny fahorianao dia Andriamanitra izany, Izy ilay Ray tonga lafatra izay nanana zanaka an-davitrisa niodina taminy. Azonao atao ny mivavaka ho an'ny zanakao, sy manome fitiavana ary manohana azy ireo. Azonao atao ny manohana azy ireo raha eo am-pitolomana ho amin'ny fiverenana amin'Andriamanitra izy ireo. Aoka tsy hatahotra ny hangataka fanohanana sy vavaka amin'ireo mambran'ny fiangonana, ary aza manome tsiny ny tenanao. Aza hadinoina koa ireo mambra hafa ao amin'ny ankohonanao raha mifantoka amin'ilay nania ianao. Tsarovy fa tia ny zanakao mihoatra noho ny fitiavanao azy Andriamanitra.